Waa kuwee labada xiddig ka tirsan Kooxda Arsenal kuwaasoo isku dhacay ka hor kulankii ay galabta ka adkaadeen Fulham? – Gool FM
(London) 12 Sebt 2020. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa guul ku furatay horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan, kaddib markii ay 3-0 uga adkaadeen naadiga ay isku magaalada ka dhisan yihiin ee Fulham.
Yeelkeede, waxaa la soo warinayaa in ka hor kulankaas ay isku dhaceen labo ka mid ah xiddigaha kooxda Gunners.
Warbaahinta Ingiriiska ayaa baahisay in labada ciyaaryahan ee kooxda Arsenal, Eddie Nketiah iyo Dani Ceballos ay isku dhaceen intii lagu guda jiray iskululeynta kulankii ay guusha ka gaareen Fulham, macallin Arteta ayaana labada ciyaaryahan fariisiyey kursiga keydka, inkastoo ay kulanka gadaal kaga soo biireen.
Isku dhaca labadaan xiddig ayaa ka dambeysay kaddib markii xiddiga reer Spain ee Dani Ceballos uu si adag u raacday laacibkan da’da yar intii lagu guda jiray iskululeynta, Jariiradda Mirror ayaana warinaya in jahawareerka ay ka qaadeen kursiga keydka ay fududeysay isku dhacooda.
Warbixinta ayaa intaas ku daraysa in labada ciyaaryahan ay is-weydaarsadeen erayo kulal ka hor inta aysan soo kala dhex-galin xiddigaha kale ee kooxda, iyadoo xitaa markale ay dhacday in Nketiah uu kubadda si ula kac ah markale ugu darbeeyey dhanka Dani Ceballos.
Xaaladda ayaa caadi ku soo noqotay iyadoo labadaan xiddig bedel lagu keenay qeybtii labaad ee ciyaarta, iyadoo kooxdooda ay guul weyn ka qaadatay kooxda Fulham.